राजधानीकाे कलंकीमा पहुनाहरूका लागि हुने भो यस्तो आपत! – PathivaraOnline
Home > समाचार > राजधानीकाे कलंकीमा पहुनाहरूका लागि हुने भो यस्तो आपत!
राजधानीकाे कलंकीमा पहुनाहरूका लागि हुने भो यस्तो आपत!
admin January 5, 2019 समाचार	0
काठमाडौँ । कलङ्कीमा बस बिसौनी व्यवस्थित गर्न माग गरिएको छ । भएर काठमाडौँ भित्रिने लामो दूरीका सवारी साधनको बस बिसौनी सोही आसपास क्षेत्रमा व्यवस्थित गर्न माग गरिएको हो ।विगतमा कलङ्की, मकालु तथा त्यस आसपास क्षेत्रमा रोकिँदै आएका सवारी साधन अहिले कलङ्की क्षेत्रको सडक स्तरोन्नति तथा विस्तारपछि सीतापाइलामा पुर्याइएको छ । सीतापाइलामा बस बिसैनी बनाउँदा काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाट आउने यात्रु समस्यामा परेका छन् ।
यात्रुहरुलाई खान, बस्नका लागि आवश्यक पूर्वाधारको अभाव देखिएको छ । कलङ्की आसपासका करीब १५० स्थानीय होटल तथा अतिथि गृह बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । कलङ्की होटल एण्ड गेष्ट हाउस एशोसिएशनले जनप्रतिनिधि तथा सरोकार पक्षसँग छलफल गर्न आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठले स्थानीय जनतालाई लाभान्वित हुने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सो क्षेत्रमा विभिन्न तह र वर्गलाई समेट्ने अतिथि गृहको पूर्वाधार तयार भइसकेकाले पाहुनाका लागि उपयुक्त वासस्थान मानिन्छ । कलङ्कीबाट बिहान चाँडै गाडी छुट्ने हुँदा टाढाका यात्रु आएर वास बस्ने गरेका छन् । सबै दृष्टिकोणले ग्राहकको लागि उक्त क्षेत्र सुविधायुक्त भएका कारण बस बिसौनी टाढा राख्न नहुने एशोसिएशनका अध्यक्ष मोहिणिप्रसाद आचार्यले विचार व्यक्त गरे ।
नागढुङ्गा–कलङ्की सडक खण्ड विस्तारको काम फागुनमा पनि नसकिने पक्कापक्की भएको छ । मुआब्जा विवाद रहेकाले सो क्षेत्रका घरलाई नचलाई सडक विस्तारको काम टुंग्याउने गरी मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि यसको निर्माणमा ढिलाई देखिएको हो । कलङ्की थानकोट, नागढुङ्गा नाका हुँदै उपत्यका बाहिरिने तथा भित्र प्रवेश गर्ने सवारीको चापले गर्दा कलङ्कीमा अत्यधिक सवारी जाम हुने गरेको छ ।
त्यसैगरी चक्रपथ परिक्रमा गर्ने स्थानीय सवारीको चापले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन नै अस्तव्यस्त भएको ट्राफिक अधिकृत विमल थापाले जानकारी दिए । उनले सरोकार पक्षको माग र यात्रुको सहजतालाई ध्यान दिएर बस बिसौनी हेरफेर गर्न सकिने बताए ।
घर बनाउदै हुनुहुन्छ ? वर्षौको कमाई पानीमा जाला है ! यी सिमेन्ट र डन्डी गुणस्तरहीन प्रमाणित
फेरि दोलखाबाट आयो टिपर र मिनबस ठोकिएपछि यस्तो दुःखद खबर